News | Hindu
News | Tag: Hindu
हिन्दू राष्ट्र कायम नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने
पोखरा । मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र कायम नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने क्षत्री समाज नेपालले चेतावनी दिएको छ । आरक्षण विभेद अन्त्य गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुलुकमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दूराष्ट्र कायम गराउनका लागि दबाब दिन बुधबारदेखि मेची महकाली यात्रा गर्दैछ ।
‘यो भगवानको घर हो, भगवानको घरमा सबै मान्छे जान पाउनुपर्छ’
काठमाडौं । सोमबार बिहान ११ बजे । काठमान्डुको गुहेश्वरी मन्दिरमा मानिसहरूको बाक्लो भीड थियो । विवाहित जोडीहरु मन्दिरबाट बाहिरिन्थे । बिहे गर्न लागेकाहरु घुम्टो ओड्दै भित्रिन्थे ।
हिन्दु धर्म मान्नेहरुको शव किन जलाईल्छ ?
हिन्दु धर्म मान्नेहरुको शव जलाएर नष्ट गरिन्छ । मुस्लिम, इसाई तथा बुद्ध धर्म मान्नेहरुको शव गाड्ने गरिन्छ । यस कुराको जानकारी धेरैलाई थाहा छ । तर, हिन्दु धर्ममा किन शवलाई जलाइन्छ ? यसको कारण धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।